Qofna ka dibna qofna ma sheegan karo inuu Ilaah la hadlayo dadka kale; Waan ka daalnay wadaaddadaas nacasnimada leh iyo kuwa Ilaah oo dhan; garan maayaan waxay dhahayaan xitaa ma barto Kitaabka Quduuska ah | KONGOLISOLO
Baybalku waa cad yahay: Ilaah uma baahna cid na la hadasha. Sidaan u aqrin karno tan si cad iyo luqad aan kala go 'lahayn kitaabka nebi weyn ee Ishacyaah:
Ayaa baadhay Ruuxa Rabbiga, oo hore u jiray xoogaa sii talo?
Kumaa horey ugula tashaday inuu helo tilmaamaha?
Bal yaa weligiis bartay jidka xaqnimada?
Bal yaa hore isaga wax u baray xigmadda, Oo yaa ogeysiiyey jidkii waxgarashada? (Ishacyaah 40 aayadaha 13 iyo 14).
Qof kastaa wuxuu leeyahay khibrad u gaar ah oo shakhsi ahaaneed oo xagga Eebbe ah. Ilaahow miyaanu ku aqoon?
Miyuusan ogayn meeshuu ka heli karo ??
Miyuusan ogeyn baahiyahaaga iyo waxaad dooneysid?
Sida nin kasta loogu abuuray suuradda Ilaah, miyaanay dhammaan dadku ahayn carruurta Ilaah?
Qof kastaa ma u dhowaan karaa isaga la'aantiis dhexdhexaad?
Ilaahay oo keliya ayaa awood u leh inuu u sheego ilmaha hooyadiis hooyadiis inuu u soo jeesto si uu uga fududeeyo bixitaanka. Isaga kaliya ayaa garanaya tirada timaha madaxaaga ku jira, tirada xiddigaha cirka, tirada ciidda badda dhexdeeda.
Ee yaa ka horjoogsada inuu Ilaahay nala hadlo ??
Ayaa afkiisa xidhay?
Kumaa heli kara kalsoonidaas ??
Yaa awood u leh ??
Iyo dadka naftooda ugu yeera waxgaradka, laakiin waa kuwa aan awood u laheyn fahamka yar.
Xitaa xayawaanku way ogyihiin in Ilaah uusan u baahnayn qof kale inuu caawiyo dadka kale.
Wadaadadan iyo aaminimadooda aan faraxsaneyn madaxdooda iyo aragoodaba way ku xiiraan ... Xitaa baranbaradu waxay u arkaan inay yihiin wax lagu qoslo ... lol !
Aug13 11: 30